Nagu saabsan - Xuzhou Xinqihang Caaga Warshadaha Co., Ltd.
Shirkaddu waxay ku taalaa Qing'an Warshadaha Aag, Xuzhou City, Gobolka Jiangsu, oo leh caasimad diiwaangashan oo gaareysa 45 milyan yuan iyo goob dhisme oo ka badan 70,000 mitir murabac ah. Waxaa jira in ka badan 100 shaqaale, 8 shaqaale xirfad iyo farsamo leh, iyo 2 injineero. Shirkaddu waxay leedahay Buttonfield iyo Shanghai Jingwei Waxaa jira in kabadan 20 khadadka wax soo saarka tuubooyinka (DN20mm-DN1400mm) sida Ningbo Fangli, awoodda waxsoosaarka sanadlaha ee dhuumaha balaastigga ah ayaa ka badan 30,000 tan.
Tayadu waa Nolosha
Tayadu waa nolosha. Waxaan si qoto dheer u horumarineynaa qiimaha silsiladda wax soo saarka, waxaan u hagaajineynaa nidaamka alaab-qeybiyaha, waxaanna hubineynaa tayada iyo xasilloonida dhinaca sahayda. Waxaan hirgelineynaa maareyn caato ah waxaanna ku guuleysan karnaa tartan tayo sare leh iyada oo loo marayo maareynta hal-abuurnimada R & D, wadarta maaraynta tayada, iyo howlaha la jaangooyay Shirkaddu waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO90001, shahaadada nidaamka maaraynta deegaanka ee ISO14001, shahaadada nidaamka nidaamka maaraynta caafimaadka iyo caafimaadka shaqada ee OHSAS18001, BV, SGS, TUV field iyo shahaadada wax soo saarka, iyo alaabteeda waxay dhaafeen ISO4427, ASTM D3035, EN 12201, AS / NZS 4130 Imtixaanka heerka saddexaad ee caalamiga ah ee caalamiga ah.
Hal-abuurnimadu waa Ruux
Hal-abuurnimo waa nafta shirkad. Shirkad warshadeed oo casri ah, waxaan la kulannaa baahiyaha gaarka ah ee macaamiisha iyada oo loo marayo cilmi baarista tikniyoolajiyadda iyo hal-abuurnimada. Waxaan leenahay xarumo R&D iyo shaybaar heer sare ah, oo si isdaba joog ah u sameeya kormeer iyo tijaabooyin sanadka oo dhan, waxayna bixin karaan adeegyo OEM loo habeeyay iyadoo loo eegayo baahida gaarka ah ee macaamiisha ee dhinacyada kala duwan, si macaamiisha loo siiyo xalal tayo sare leh Waxqabadka aad u wanaagsan iyo aqoonsiga sumcadda ee badeecadaha, wax soo saarka ayaa si ballaadhan loogu isticmaalay nidaamyada gaadiidka dhuumaha ee dhismaha kaabayaasha dowladda hoose, warshadaha, beeraha, warshadaha kiimikada, batroolka, macdanta, aquaculture, gaadiidka waddooyinka, iyo dhismaha madaniga ah, iyo si guul leh ayaa loo furay Suuqa caalamiga ah, waxaa loo dhoofiyaa in ka badan 30 dal iyo gobollo ay ka mid yihiin Bangladesh, Vietnam, Chile, Argentina, Czech Republic, Russia, UAE, Turkmenistan, Iran, iyo Sudan, waxayna ku guuleysteen amaan mideysan isticmaalayaasha!
Astaamaha Muhiimka ah ee Xinqihang Caaga Warshadaha PE Pipe
Qalabka wax soo saarka oo tayo sare leh
Doorashada Sinopec iyo soo dejinta alaabta ceeriin oo tayo sare leh, waxaan si adag u aaminsanahay in kaliya alaabta ceeriin ee wanaagsan iyo tikniyoolajiyad aad u fiican ay soo saari karaan tuubooyin tayo sare leh.
Qalabka wax soo saarka oo dhameystiran
Hogaanka uqabsada qaadashada qalabka waxsoosaarka maqaarka ee horumarsan ee gudaha, iyo kor u qaadida qalabka si aad safka hore uga gasho warshadaha.
Kooxda muhiimka ah ee farsamada oo ka badan toban qof, celcelis ahaan 10 sano oo khibrad farsamo warshadeed ah.
Maareyn tayo fiican leh
Qaaciddada la dhammeeyey ayaa la xaqiijiyey marar badan, iyo tayada qaybo badan ayaa loo gudbiyaa kormeerka.
Alaab iyo adeegyo tayo leh
Bixinta iibinta hore ee xirfadeed, iibka, iyo adeegyada iibka kadib, iyo inay siiso taageero farsamo oo bilaash ah.
Waxaan ku adkeysaneynaa "maareynta daacadnimada, tayada ugu horeysa, iskaashiga guuleysiga, mas'uuliyadda bulshada" sida qiyamka asaasiga ah ee shirkadda, waxaanna si diiran u soo dhaweyneynaa macaamiisha gudaha iyo kuwa ajnabiga ah inay soo booqdaan oo ay hagaan shirkadeena Shirkadeena waxay si daacadnimo leh ulashaqeyn doontaa asxaabta dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada fikirka iskaashi ee "tayo tayo sare leh, sumcad tayo sare leh, adeeg tayo sare leh" si loo abuuro mustaqbal wanaagsan!